လက်တလော ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်၊ ဆန္ဒ၊ ခံယူချက် ဖြစ်တည်မှု.....
Pyae Sone | 3:24 PM | Tag ပို့စ်
အမ စိုးဝှက်က ရေးစေချင်လို့Tag ထားတာကြာပါပြီ ကျနော်လည်း အခက်အခဲတွေကြောင့်
မတင်ဖြစ်မရေးဖြစ်တာကြာသွားတယ်။ မစိုးဝှက်ရေ.... အကြွေးကို အခုမှပဲဆပ်ဖြစ်တော့တယ်....
ကိုယ့်ရဲ့ နာမည် ................. ပြည့်စုံ (ကင်ပွန်းတပ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေ...။)
ကိုယ့်ကို သူငယ်ချင်းတွေက ဒီလိုခေါ်တယ်.... တချို့ကတော့ ပြည့်စုံ-(နာမည်သာ ပြည့်စုံတာ... လူကတော့ ဟဲဟဲ..  ပြည့်စုံသေးဘူး... )၊ အရင်းနှီးဆုံးသူက Jan Jan တဲ့ January လမှာမွေးလို့တဲ့…။တချို့ကတော့ ပြုံစေ့.... ငယ်ငယ်ကဆို “ဂျပန်ငပု” တဲ့ မွေးခါနီး အမေက အိမ်မက်မက်တယ်တဲ့ ဂျပန်တစ်ယောက်က ဒီအိမ်မှာနေပါရစေတဲ့ ဆိုပြီးမက်လို့တဲ့... ဂျပန်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီး (ဂျပန်တွေက ပုလို့ ဟိုခေတ်က ဂျပန်ငပုလို့ခေါ်ကြတယ်) ဒါကြောင့် ကျနော့် မွေးဇာတိ ရက်ကွက်ကသူတွေ အားလုံးလိုလိုက ခေါ်ကြတယ်... အဲဒါကြောင့်ထင်တယ် အခုကျနော်အရပ်က ၅”ပေ ၁၁လက်မ ရှိတယ်။ နာမည်စီးလိုက်ပုံများနော်.... ဟဲဟဲ 
ကိုယ်ဒီမှာနေတယ်........ အားလုံးရဲ့အဝေး အမေ့ရဲ့ မေတ္တာရိပ်နဲ့အဝေး... Fort Worth City, Texas State, USA.
ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင်........... 817-763-8609 (ဆက်သွယ်ချင်ရင်ပေါ့)
အရောင်ဆိုရင် ....... အဖြူရောင် နဲ့ အနက်ရောင် ပြီးတော့ မိုးကောင်းကင်ရဲ့တိမ်သားအရောင်…။
အ၀တ်အစားဆိုရင် ........ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆိုရင် အားလုံးကြိုက်တယ်…။
အစားအစာဆိုရင် ………. စားလို့ရတာ အကုန်စား စိုက်လို့ရတာ အကုန်စိုက် …..ပုံ/ တပ်မတော်…..။ ဟဲဟဲ  ကျနော်က ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ချက်တဲ့အစားအစာ ပိုကြိုက်တယ်…။ အသားဆိုရင် အကြေးခွံပါတဲ့ငါး….။
ပစ္စည်းဆိုရင်…….. စက်ပစ္စည်းဆိုရင် သေးသေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်မဲ့အရာ…. အသုံးအဆောင်ဆိုရင်တော့ ပေါ့ပါးပြီး ၀န်ကျဉ်းမဲ့အရာမှန်သမျှ….။
သီချင်းဆိုရင်တော့……. Pop,Rock,Punk, ကိုယ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်မဲ့ ခံစားမှုသီချင်းကိုဆို ပိုကြိုက်….။
စာရေးဆရာ……. ကျနော်က စာရေးဆရာကိုရွေးပြီးမဖတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မည်သည့် စာရေးဆရာဖြစ်ဖြစ်….။
စာအုပ်……. မှတ်သားစရာ ဒဿနတွေ ပညာပေးလေးတွေပါတဲ့ စာအုပ်မှန်သမျှ …..။
Life style …….. လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လူသားပီသစွာနေထိုင်ပြီးငြီမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုလိုချင်သူ….။
ကိုယ့်ရဲ့ ၀ါသနာ ….. ကွန်ပြူတာတစ်လုံးရှိရင် “သူ”ကလွဲပြီး အားလုံးမေ့… ဟဲဟဲ…    ။
ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူက ……. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြီးတော့ …ကျနော့်ကို အမြဲတမ်းရင်ခုန်အောင် ရင်တုန်အောင် လုပ်တတ်တဲ့ “သူ”…။
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက ….. အမေ (ထာဝရ အေးမြတဲ့ မေတ္တာတရားကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိသူ) ...။
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက …. ကျနော်နဲ့ အဝေးတနေရာမှာရောက်နေတဲ့ “ သူ ”….။
ကိုယ့်ကို အများဆုံး နားလည်မှုပေးနိုင်သူက …… ပြုံစေ့ဆိုတဲ့ ပြည့်စုံ…(ပြီးတော့)အားငယ်ချိန်တိုင်း အားပေးတတ်တဲ့ “သူ”…။
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက ……. ကွေကွင်းခြင်းတွေကို ဖန်တီးပေးနေတဲ့ကံကြမ္မာ ……။
ရင်အခုန်ဆုံး အချိန်……… ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လုပ်နေချိန်…..။ တခုခုပေါ့… ဟဲဟဲ… :) :) ။
အကြောက်ဆုံးအချိန် …….. တောတိုးရင်း မျက်စိလည် လမ်းမှားသွားချိန်…။
အပျော်ဆုံးအချိန်……….. မိသားစုစုံစုံညီညီနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနေခဲ့ရသောအချိန်။ အမေနဲ့အဆက်အသွယ်ရတဲ့အချိန်။ သူနဲ့ အဆက်အသွယ်(ဖုန်း)ရတဲ့အချိန်…။
အမှတ်တရနေ့ …..………ကျနော်ချစ်တဲ့သူတွေရယ် ကျနော်မုန်းတဲ့သူတွေနဲ့ နောက်ဆုံး ခွဲခွာခဲ့ရသောအချိန်ပေါ့.။ ၁၂/၁၁/၂၀၀၄ ..။ ၉/၉/၂၀၀၈…..။
ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင် တောင်းမဲ့ဆု …… ကောင်းမွန်ပြီး ပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀ဖြစ်တည်မှု….။
(မှတ်ချက်။ ။ လူတွေဟာ မိမိဘ၀မှာ အကောင်းဆုံးတွေကိုတော့ လိုချင်ကြတာချည်းပါဘဲ…။ ဒါပေမယ့် ဆုတောင်းပြည့်ခြင်းမပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ လောကဓံကိုတော့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေနေရတယ်… ဒါကြောင့် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာကျန်းမာလိုပါ၏ ဟူသော တောင်းဆုကို လူသားအများစု၏ ဘုံဆုတောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တယ်…။ )
အချစ်ဆိုတာ …… အင်း….. ကြားဘူးနားဝတော့ရှိတယ် အချစ်ဆိုတာ… ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်လိုဘဲတဲ့ ရင်တုန်အောင်လည်း လုပ်နိုင်တယ် အိပ်မပျော်အောင်လည်း လုပ်နိုင်တယ်တဲ့ ဒါပေမယ့် အဲဒီခါးသက်တဲ့ အရသာကိုပဲ စွဲလန်းနေကြတယ်တဲ့…. ချစ်ဘူးသူတိုင်း ခံစားဘူးကြမှာပါ….   
အမုန်းဆိုတာ …….. အမေမွေးပေးလိုက်ကတည်းက မုန်းတီးဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက် မသိပါ…။ ဒါပေမယ့် … ရင်ထဲကလာတဲ့ ခံစားချက်တွေကို နာကြည်းချက်တွေအဖြစ် ပြောင်းလည်ဖို့အတွက် ပေါက်ကွဲသံစဉ်လို့ထင်တယ်။
အလွမ်းဆိုတာ ….. ခွဲခွာသွားရတဲ့အခါ၊ ဝေးသွားတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခုပဲ…။
သံယောဇဉ်ဆိုတာ …… ဖြတ်တောက်ရန် ခက်ခဲပြီး တုတ်နှောင်မိရင်လည်းရုန်းထွက်ရန်ခက်ခဲတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းပေါ့….။
ဘ၀ဆိုတာ……. ကုန်ခမ်းစီးမျောသွားတဲ့အရာ…။ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ လမင်းကြီးလိုပါဘဲ တစ်တရံမှာ ပြည့်ပြီး တခါတရံမှာ ကွယ်နေတတ်တယ်လေ…..။ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းကြေကွဲခြင်းတွေနဲ့အတူပေါ့…။
သူငယ်ချင်းဆိုတာ ….. ဆိုးတူကောင်းဘက်ပေါ့…။
ချစ်သူဆိုတာ ….. ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀ထဲမှာ သူရှိနေတာ အနှောင့်အယှက်တစ်ခုမဖြစ်စေဘဲ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကြင်နာ ခြင်းများကို မျှဝေပေးသူ….။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒီလိုထင်တယ် …… နာမည်တစ်ခုပဲ ပြည့်စုံသေးတဲ့ ကျနော် (ပြည့်စုံ) မြစ်တစ်စင်းလို ဆက်လက်စီးဆင်းရအုံးမှာပေါ့….။
ကိုယ့်ရဲ့ လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်က …… ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနေထိုင်ပြီး… သတ္တိရှိရှိ သေဆုံးလိုက်ပါ…။
အပြောချင်ဆုံး စကားတခွန်း ……… လူဆိုတာ တစ်ဦးတယောက်တည်းရပ်တည်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို မမေ့ကြပါနဲ့ ဒီနိုင်ငံ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလည်းနေသမျှတွေသည် ငါတို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိကို အားလုံးမှာရှိစေချင် ပါတယ်။
အချိန် - 3:24 PM
Pyae Sone | 5:24 PM | ကဗျာ
အဝေးမှာ လန်းဆန်းသလား ညှိုးနွမ်းသလား… ငါမသိ…။
ဘ၀ရထားပေါ် ဆက်ကာ လိုက်ပါရအုံးမယ်
ကိုယ်တို့အတွက် ပျော်စရာ ဘူတာရုံလေးတစ်ရုံတော့
P.S (အလွမ်းဆိုတာ မွေးရာပါ မဟုတ်ပေမယ့် အဓိပ္ပါယ်မဲ့ လွမ်းနေမိတယ်…)
အချိန် - 5:24 PM
Pyae Sone | 5:00 AM | Statement
(၆၁) နှစ်မြောက် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား တိုင်တည် ကတိသစ္စာပြုချက်
ရက်စွဲ။ ။ ၁၆၊ ၇၊ ၂၀၀၈။
ကျွန်ုပ်တို့ မြေသြဇာအဖွဲ့သားများသည် လူထုတရပ်လုံးအတွက် လိုအပ်လာမည့်အချိန်တွင် ကိုယ်ကျိုးစွန့်မည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ မှန်တာကိုပြောဆိုရဲသူများဖြစ်သည်။ မှန်တာကိုမပြောဆိုရဲတောင် မှားမှန်းသိတာ၊ မမှန်တာလုပ်နေတာကိုတော့ လုံးဝမထောက်ခံ မတိုက် တွန်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့မြေသြဇာအဖွဲ့သားများသည် နိုင်ငံရေးအသိပညာ၊ နိုင်ငံရေးရေချိန်များနုနယ်နေသေးပါသဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပနောင်တော် များဆီမှ များစွာသင်ယူလေ့ကျင့်မှုကို လိုအပ်နေပါအုံးမည်။ အတိုက်အခံအင်အားစုခေါင်းဆောင်များ ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေး အင်အားစုများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရဲ့ အတိတ်တွေ၊ အမြင်မတူတာတွေ အားလုံးကို ဘေးဖယ်ပြီး အလွန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ လူထုတပ်ပေါင်းစုကြီးတရပ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကပြောကြားခဲ့သလို `အာဏာရှင်ဝါဒ၊ လူမျိုးအချင်းမုန်းတီးရေးဝါဒ၊ စစ်တပ်ကသာ လွှမ်းမိုးရမည်ဆိုတဲ့ ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်ဝါဒ၊ မင်းစိတ်ပေါက်နေတဲ့ အရာရှိတွေ ချယ်လှယ်တဲ့ စနစ်ဆိုးမျိုးရှိနေလျှင် အများပြည်သူတို့ဆန္ဒနှင့် လုပ်ကိုင်ရတဲ့ ဒီမိုကရေစီဝါဒခေတ်မစားနိုင်တဲ့ ဖက်ဆစ်ဝါဒ ဆင်တူရိုးမှား ပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်။ ဒီဝါဒမျိုးပေါ်လာရင် ပြည်သူလူထုဟာ လွတ်လပ်ရေး ဆိုတာမရနိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အားလုံး ဒီမိုကရေစီဝါဒကို ခေတ်စားလာအောင်လုပ်ရမယ်။ အဲဒီဝါဒမျိုးရအောင် လွတ်လပ်တဲ့ ဗမာနိုင်ငံ ထူထောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်။´ ဒါကြောင့် ……
စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမှစ၍ အောက်ခြေ တပ်မှူးတပ်သားအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့မှ သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါ ကျေးလက်တောရွာဒေသတွေ၊ ထောင်၊ အချုပ်ခန်းတွေမှာ သတ်ခဲ့ဖြတ်ခဲ့ အနိုင်ကျင့်ခဲ့တာတွေ ရန်ကုန်မြို့အပါအ၀င် မြို့တကာ လမ်းတကာတွေပေါ်မှာ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တိုင်းသွေးချောင်းစီးသတ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သူ မည်သူ့ကိုမဆို ပုဒ်မအမျိုးမျိုးတပ်ပြီး ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် နှစ်ရှည်ထောင်ဒါဏ်ချမှတ်ခဲ့တာတွေ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင်လည်း ဘုရားသားတော် သံဃာတော်တွေအပါအ၀င် ကျောင်းသားလူထုတွေကို ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ရမ်းကားမှုတွေပြုလုပ်လို့ ကျနော်တို့လူထုနှင့် ခင်ဗျားတို့ လက်တဆုတ်စာ စစ်အာဏာရှင်တွေဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာအရပ်ရပ်ဟာ ပြေလည်သွားပါသလား။
လက်တဆုပ်စာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်များဖြစ်နေသော ကြံ့ဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင် ရဲဘော်များအနေဖြင့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် ထားရာနေ စေရာသွား ခိုင်းတာလုပ်ဆိုသည့်အလုပ်များ ဆက်လက်လုပ် ကိုင်ပါက လူထုတရပ်လုံးအတွက် စတေးခံဖို့ ပြင်ဆင်ထားကြပါ။
ရဲရဲတင်းတင်း အာမခံပြီး ပြောနိုင်သည်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် မည်သည့် အဖွဲ့အစည်း မည်သူတဦးတယောက်အပေါ်မှာမှ မသန့်ရှင်းမစင်ကြယ်သော စိတ်ထားများနှင့် ပက်သတ်ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ မြန်မာပြည်စစ်အာဏာရှင် ကျဆုံးစေဖို့အတွက် ညီတဲ့သူများနှင့် ထိစပ် ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရာတွင်လည်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း……
ယခုကျရောက်သော (၆၁) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့တွင် ကျဆုံးသွားသောခေါင်းဆောင်ကြီးများနှင့် စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ဆန့်ကျင်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော ရဟန်း၊ရှင်၊လူ၊ ကျောင်းသား၊ပြည်သူများ၏ ၀ိဥာဉ်များကို တိုင်တယ် သစ္စာပြုပြီး စစ်အာဏာရှင် စစ်ဘားတိုက်ပြန်ရောက်သည်အထိ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့မှ ကတိသစ္စာပြုပါသည်။
မည်သည့် စစ်အာဏာရှင်မှ လူထုကို တိုက်ရိုက်မအုပ်ချုပ်စေရ။
အချိန် - 5:00 AM
Pyae Sone | 2:50 AM | ကဗျာ
မောင် မောင်ခေါ်တုန်း ဗျာထူးဖို့
စိတ်ရင်းစေတနာ အရိုးခံနဲ့ဒို့ပြည်သူနဲ့ ဒို့နောင်တော်တွေ
အ ကောင်း ဆုံး မြေ သြ ဇာ
အချိန် - 2:50 AM
Pyae Sone | 2:26 AM | ကဗျာ
မြေသြဇာ ရဲဘော်များမှ ရောက်လေရာအရပ်တိုင်း နေရာတိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ အာဏာရှင်ကို တိုက်ထုတ်နေပါတယ်။ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ပံ့ပိုးပေးကြပါ ရသည့်နည်း ရသည့်လက်နက်ဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဆိုတာ ကို ယခု ၁၉ ဇူလိုင်ကဗျာဖြင့် အာဇာနည် အပေါင်းအား တိုင်တည်ရင်းဖြင့်…
အချိန် - 2:26 AM
Pyae Sone | 6:47 AM | ဆောင်းပါး
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေရဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ ပညာရေးရည်မှန်းချက်၊ အမျိုးသားရေးလွတ်မြောက်ရေး ဒီမိုကရေစီရည်မှန်းချက် စဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၂၀ သပိတ်၊ ၁၉၃၅-၃၆ သပိတ်၊ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုတဲ့ ပြည်လုံးကျွတ် အထွေထွေသပိတ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
၁၉၆၂ခုနှစ် မတ်လ (၂) ရက် အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း တော်လှန်ရေးကောင်စီက မေလ (၉) ရက်နေ့မှာ တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းတဲ့အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး တော်လှန်ရေး ကောင်စီက တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်အားလုံးကို ချုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ မေလ (၁၀)ရက်နေ့မှာ ဦးနေ၀င်းက တက္ကသိုလ်ကောင်စီဝင်တွေကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး တက္ကသိုလ်ကောင်စီကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေအရ မဲပေးခြင်းစနစ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလိုပ နဲ့ ရွေးချယ်ခန်ထားတဲ့ ပါမောက္ခဦးကာကို ပေါမောက္ခချုပ်အဖြစ် တချက်လွှတ်အမိန့်နဲ့ ခန့်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာတွေကို ချုပ်ချယ်တဲ့ ဥပဒေစည်းမျဉ်းသစ်ဆိုတာတွေကို တခုပြီး တခုထုတ်ပြန်လာတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆောင်တွေကိုည(၈)နာရီမှာ သော့ခတ်ပိတ်မည်ဆိုသည့်အမိန့် ထွက်လာသည့်အခါ ကျောင်းသားတွေနေနဲ့ ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်မှုတွေကို စရတော့သည်။
ဒီအဖြစ်အပျက် သင်္ခန်းစာယူပြီး နောက်နောင် ဒါမျိုးမဖြစ်ပွားအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလည်းဆိုသည့် ကောက်ချက်မျိုး မရှိသေးပါ။ ဇူလိုင် (၇)ရက်အရေးအခင်းမှ အဖြစ်မှန်တွေကို ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုတာဟာ ဇူလိုင်(၇)ရက်ကို သိမှီလိုက်သူတွေအနေနဲ့ ကြိုးစားကြမယ့်လမ်းကလွဲလို့ တခြားလမ်းမရှိတောပါဘူး။
အချိန် - 6:47 AM
ဒေါ်စု (၆၃) နှစ်မွေးနေ့မှသည်အသက်ရာကျော် ရှည်ပါစေ....
Pyae Sone | 9:56 PM | မွေးနေ့အမှတ်တရ
` ဒီအရေးအခင်းဟာ တိုင်းပြည်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အရေးအခင်းဖြစ်နေပါတယ်။ ကျမလည်း ဖေဖေရဲ့ သမီးလုပ်ပြီးတော့ ခေါင်းရှောင်ပြီးတော့ နေလို့မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒီအရေးအခင်းဟာ တကယ်တော့ ဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးလို့ခေါ်ရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ရေးကို တမျိုးသားလုံးလိုချင်တဲ့ ဆန္ဒပြင်းပြလွန်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ´
၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၆ ရက် ရွှေတီဂုံဘုရားအနောက်ဘက်မုဒ်ဦး..။ လူထုအစည်းအဝေးပွဲကြီးမှ သန်း(၄၀)ရှိသော မြန်မာပြည်သူများသို့ တုန်ဟီးသွားစေခဲ့၏။
ဤျနေ့မှစ၍ ဒေါ်စုသည်လူထု၊ လူထုသည် ဒေါ်စု ခွဲမရအောင် သွေးစည်းမိခဲ့ကြ၏။
ထိုမှစ၍ တနေ့ပြီးတနေ့၊ တရက်ပြီးတရက် အချိန်တွေက ရင့်မှည့်၍ လာခဲ့၏။ တကြောင်းပြီးတကြောင်း တစ်မျက်နှာပြီးတစ်မျက်နှာ ရေးထိုးခဲ့သည့် ဒေါ်စု၏ ကိုယ်ရေးသမိုင်းများက ဒုတိယလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲသမိုင်းတွင် ဂုဏ်ရောင်ပြောင်မြောက်စွာဖြင့်…..။
အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် ၊အနာဂတ် ကာသလသုံးပါးက ဒေါ်စု၏ လှပသော သမိုင်းကျောက်စာတိုင်များတွင်……
နိုဗယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်..…. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် …. စသည်… စသည်ဖြင့် မြန်မာ့သမိုင်းက ကဗ္ဗည်းထိုးကြ၏။
ဒေါ်စုသည် … ရိုးသား၏။
ဒေါ်စုသည်… ကိုယ်ကျင့်သီလ သိက္ခာရှိသည်။
ဤသို့ဖြင့် … ဒေါ်စု၏ မွေးနေ့အား မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြ၏….။
ဒေါ်စု … ကျန်းမာပါစေ…။
ကျနော်တို့သည် ဒေါ်စုအား မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ဒုတိယလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့……။
အချိန် - 9:56 PM
Pyae Sone | 12:40 AM | ကဗျာ
နာဂစ်မုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးကြေကွဲရပါတယ် ထို့ထပ်ပိုဆိုးတာက လူလူချင်း စာနာထောက်ထားမှုမရှိဘူး။ ရလိုမှုတစ်ခုပဲကြည့်တတ်တဲ့ လက်တဆုပ်စာ အာဏာရှင်စစ်ဘီလူးတွေရဲ့ နိုင်လိုမင်းထက်ပြုမူဆံဆက်မှုတွေကို ကျနော်တို့ပြည်သူတွေခံစားနေရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အခြေအနေလေးတွေတိုက်ဆိုင်လို့ ဆရာမောင်သွေးသစ်ရဲ့ ခြင်နဲ့ဖြုတ် (စံပယ်ဖြူ မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၉) စက်တင်ဘာ၊၂၀၀၂ )တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ကဗျာကိုကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ခြုံစောင်မဲ့၊ ဒို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်
တဲကုပ်ကြားမှာ၊ ကြီးထွားနေတဲ့ ငါတို့ပါ။
အချိန် - 12:40 AM
ဗေဒါလမ်းဂျာနယ် အတွဲ(၁) အမှတ်(၃)
Pyae Sone | 5:58 AM | သတင်း
baydarlan3 - Uploadadoc
Read this doc on Scribd: baydarlan3
အချိန် - 5:58 AM
Pyae Sone | 11:50 PM | poem | ကဗျာ
အချိန် - 11:50 PM
Pyae Sone | 10:55 AM | poem | ကဗျာ
Kyaw Lwin Myint,
အချိန် - 10:55 AM
Pyae Sone | 1:27 AM | Statement
မေ ၂ ရက်နဲ့ ၃ ရက်နေ့တွေမှာ တိုက်ခတ်သွားတဲ့ နာဂစမုန်တိုင်းကြောင့် လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီသေဆုံးရတယ်။ သန်းနဲ့ချီပြီး အိုးအိမ်နေရာတွေ မဲ့သွားရတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ အသက်အန္တရာယ်များနဲ့ စက္ကန့်တိုင်း နာရီတိုင်း ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။
မြန်မာပြည်သူအားလုံး ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားသလို စစ်အစိုးရကလဲ ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးမကြေငြာခဲ့ပါ။ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောစရာမလိုတော့ပါ ဘူး။
အခုပြောစရာရှိတာက ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရက ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အမြင်သဘောထားနဲ့ ပြောချင်ရာပြောပြီးလုပ်ချင်တာ လုပ်နေတာကို ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနားချနေရဦးမယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် သေကြရမဲ့ သန်းချီတဲ့အသက်တွေဟာ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေကြရတော့မယ်။
ယခုချက်ချင်း ဘယ်သူ့ခွင့်ပြုချက်မှ စောင့်ဆိုင်းမနေတော့ဘဲ ကရုဏာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြတ်သားရဲရင့်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကယ်တင်ပေးကြပါ။
ယခုချက်ချင်း တစစီကွဲကွာသွားကြတဲ့မိသားစုများနဲ့ ငတ်မွတ်နေတဲ့ ရင်ခွင်မဲ့ခလေးများကို အမြန်ဆုံးနွေးထွေးချီပွေ့ကြပါ။
မုန်တိုင်းခံပြည်သူများအား မရက်စက်ကြရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
နာဂစ် (ခ) နအဖ မုန်တိုင်းဒါဏ်ခံ ပြည်သူများ
အချိန် - 1:27 AM
KNU ဥက္ကဌ ပဒိုစောဘသင်စိန် ကွယ်လွန်
Pyae Sone | 2:32 AM | သတင်း
အသက် (၈၂) နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)ဥက္ကဋ္ဌ ဖဒိုစောဘသင်စိန်သည် ယနေ့နံနက် (၂) နာရီတွင် လူကြီးရောဂါဖြင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တနေရာတွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ဖဒိုစောဘသင်စိန်သည် ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်မှ စတင်၍ဥက္ကဌအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
ဖဒိုစောဘသင်စိန်သည် မကွယ်လွန်မီအချိန်ထိ ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီ(NCUB) သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု(NDF) ဥက္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ(ENC) ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီးနှင့်အတူ သမီး (၃) ဦး၊ သား (၁) ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။ ဈာပနအခမ်းအနားအား KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေ တနေရာတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြားသိရပါသည်။
အချိန် - 2:32 AM
Pyae Sone | 2:30 AM | ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း
၂၀၀၈ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှ စတင်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို မေလ ၂ နေ့ ညနေပိုင်းမှစတင်၍ ပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်ခဲ့သော ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသို့ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းစွာ ထိုးနှက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ ဘ၀တွေပေးခဲ့ရ အပြစ်ကင်းပြီး ဖြူစင်တဲ့ပြည်သူတွေ အနာဂတ်ရဲ့ ကြယ်စင်လေးတွေ ကြွေလွင့်ခဲ့ရတယ်၊အသက်တွေပေးခဲ့ရတယ်။ ဒါတွေဟာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လည်း ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာတော့အားလုံးသိကြမှာပါ။
အချိန်အခါ မသင့်ပဲကြွေလွင့်ခဲ့ရသော ကြယ်ပွင့်လေးများနှင့် အပြစ်ကင်းစင်သောပြည်သူအပေါင်းအား ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဘ၀ဆက်တိုင်း ဆက်တိုင်း.. အခုလိုအဖြစ်မျိးနဲ့ကင်းဝေးကြပါစေလို့...
မင်းဆိုးက နှိပ်စက် မုန်တိုင်းဒါဏ်က နှိပ်စက်ခံနေကြရသောလက်ရှိအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ အတိဒုက္ခရောက်နေကြသော ပြည်သူများကို ကူညီကြပါ။ ထိရောက်သောအကူအညီများလိုအပ်နေပါသည်။
အချိန် - 2:30 AM
Pyae Sone | 2:01 AM | Statement
အချိန် - 2:01 AM
Pyae Sone | 8:47 AM | Statement
၂၀၀၈ ခုနှစ်မေလ (၂) ရက်နေ့သောကြာနေ့ညပိုင်းမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော နာဂစ်အမည် ရှိဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ၊ ပဲခူးတိုင်း ၊ ကရင်ပြည်နယ် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ပျက်စီးဆုံး ရှုံးမှုကြီးမားခဲ့ပြီး လူအသေအပျောက်နှုံးမှာလည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာအထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ လေမုန်တိုင်းတိုက်ရိုက်အတိုက်ခံရသည့်မြို့များဖြစ်သော ဘိုကလေးမြို့နယ်တွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘိုကလေးမြို့နယ်တွင်၉၅%ခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည်လူဦးရေ၂၂၀၀၀(၆.၀၅.၂၀၀၈)နေ့အထိသေဆုံးပြီးလူဦးရေ(၅၀၀၀၀)ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သည်။ ယခုကဲ့သို့လေမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အတွက် ကုန်ဈေးနှုံးမှာ ၂ ဆ ၃ ဆ တက်လာခဲ့ပါပြီ ၊ အသားငါး ၊ လောင်စာဆီဈေးနှုံးတို့မှာလည်း အဆပေါင်းများ စွာတက်သဖြင့်လေမုန်တိုင်း ဒဏ်ခံခဲ့ရသောပြည်သူလူထုမှာစားဝတ်နေရေးအတွက် မကြုံစဖူးအခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့နေရပါ သည်။ မုန်တိုင်း ဒဏ်ကြောင့် ကျန်းမာရေး ၊ ဆက်သွယ်ရေး ၊ နေရေး ထိုင်ရေး ၊ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှု ၊သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်မှုနှင့် လုံခြံရေးအခက်အခဲများကိုစစ်အစိုးရ၏ စစ်တပ် ၊ ရဲ ၊မီးသတ် စသည်မည်သည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အ စည်းများကမှ တစုံတရာ ဖြေရှုင်းပေးခြင်းများမရှိသေးပေ ။ သို့သော် စစ်အစိုးရမှ၎င်းတို့၏ စစ်တပ်အရာရှိများ နေထိုင်သော နေရာများနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ရွာများတွင် စစ်သားများဝင်ရောက်၍ ပိတ်ဆို့နေသော သစ်ပင်များကိုရှင်းလင်းဖယ် ရှားပြီး လုံခြံရေးအ ပြည့်အ၀ယူထားခဲ့သည် ။ ကျန်နေရာများတွင် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အလိုက် ပြည်သူလူထုမှ မိမိတို့လုံခြုံရေး ၊ စားဝတ်နေရေး ပြဿနာများကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့်ဖြေရှင်းနေရသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့သော ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဒေသများကို အာဏာပိုင်စစ်အစိုးရမှ သဘာဝဘေးဒဏ်ကျရောက်ခဲ့သော ဒေသများအဖြစ် ကြေငြာခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင်ယနေ့ထိ ထိရောက်သော အကူအညီများ ပေးခြင်းမရှိသေးပါ။ ယင်းသို့ သဘာဝဘေးဒဏ်ခံစားနေရသော ပြည်သူလူထုများအား အချိန်မီ အကူအညီများပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။ အထက်ပါပြည်သူလူထုခံစားနေရသော အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးအားကျွန်ုပ်တို့လူထုတရပ်လုံး အတွက်စတေးခံ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာ အဖွဲ့အနေနှင့် ပြည်သူလူထုနှင့် အတူအပြည့်အ၀ပူးပေါင်း ပါဝင်ကူညီနိုင်ရန် အတွက်မိမိတို့တက်နိုင်သည့်ဘက်မှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြပါရန်အသိပေး အကြောင်းကြားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖွဲ့အနေဖြင့် ပြည်သူလူထုနှင့် လက်တွဲ၍ စားသောက်ကုန်နှင့် ကျန်းမာရေးကူညီစောင့်ရှောက်မှုများပေးခြင်း ဆေးဝါးများကို လှူဒါန်းပေးခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကပ် ဆိုးကြီးကျရောက်နေသော ပြည်သူလူထု၏အခက်အခဲအားကူညီနိုင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မျိုးချစ်မြန်မာများနှင့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှလည်း မိမိတို့တတ်နိုင်သလောက် ငွေအား၊ ပစ္စည်းအား ၀ိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ စစ်အစိုးရအနေနှင့်ပြည်သူလူထုရင်ဆိုင်နေရသောအ ခက်အခဲများအားအရင်မဖြေရှင်း ပဲလူထုဆန္ဒခံယူပွဲ အားအဓိကထား ဆက်လက်လုပ် ဆောင်နေပါသည် ။ ယင်းသို့လုပ်ဆောင်နေခြင်းကို မြန်မာပြည်လူထုတရပ်လုံးနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့မှ လူထုလှုပ်ရှားမှုများဖြင့် စစ်အာဏာရှင်အစိုးရအား ဘားတိုက်ပြန်ရောက်သည် အထိတိုက်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားသည်။
“မည်သည့်စစ်အာဏာရှင်မှ လူထုအား မအုပ်ချုပ်စေရ။”
အချိန် - 8:47 AM
ဆန္ဒခံယူပွဲအား (၈၁)နာရီကြာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်း
Pyae Sone | 11:34 AM | သတင်း
စစ်အစိုးရမတရားပြုလုပ်သော ဆန္ဒခံယူပွဲအားထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တနေရာတွင် အရှင်သြဘာသသည် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့သည်။ ယင်းသို့ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ရခြင်းမှာ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကိုကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် ဘ၀နတ်ထံပြန်လွန်တော်မူသွားသော သာသနာ့ဥသျှောင်နာယက မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးကောဝိဒအားဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဆရာတော်၏သက်တော် အတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံရှိ သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ဝင်အရှင်ဦးသြဘာသသည် ၃၀-၄-၂၀၀၈ ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၂း၀၀)မှ (၃-၅-၂၀၀၈)ရက်နေ့(၉)နာရီထိ (၈၁)နာရီကြာဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့သည်။
အရှင်ဦးသြဘာသသည် စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတွင် ဦးဆောင်သံဃာအနေဖြင့်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တနေရာသို့ တိမ်းရှောင်လာသောသံဃာတပါးဖြစ်ပါသည်။
လုထုတရပ်လုံးအတွက် စတေးခံ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖွဲ့(ပြည်ပ) မှ ပေးပို့သည်။
အချိန် - 11:34 AM
Pyae Sone | 1:59 AM | Statement
အချိန် - 1:59 AM
Pyae Sone | 4:41 AM | သတင်း
(၁၁၈)ကြိမ်မြောက် မေဒေးနေ့ကို ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားရုံးတွင်ရောင်ခြည်ဦး အလုပ်သမားအစည်းအရုံး(Y.C.O.W.A)၊လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(D.P.N.S)၊ မြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂ(B.W.U)၊ရခိုင်အလုပ်သမားများသမဂ္ဂ(A.W.U)၊အဝေးရောက်ဧရာဝတီအသင်း(O.I.A) စသည့်အဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အလုပ်သမား(၄၀၀)ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတက်ရောက် လာသောအလုပ်သမားများအားမေဒေးနေ့ပေါ်ပေါက်လာပုံ မေဒေးစိတ်ဓါတ်ပြန့်ပွားရေး၊ မိမိအခွင့်အရေးကို မိမိကိုယ်တိုင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအရေးပါပုံများအပြင်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဟောပြောချက်များ စသည်တို့ကိုဟောပြောခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လက်ကမ်းစာစောင်များ ကြေငြာချက်များကို၎င်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်ပရောက်မြေသြဇာအဖွဲ့ဝင်များမှ ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ တီရှပ်များ၊ ရေဒီယိုများကိုလည်း အလုပ်သမားထုအတွက် ကံစမ်းမဲများ ဖောက်၍ ဝေငှခဲ့သည်။
အချိန် - 4:41 AM
Pyae Sone | 12:32 AM | poem | ကဗျာ
ဥတုသုံးလီ မျှတတဲ့ တိုင်းပြည်
တောပြုန်း တောင်ပြုန်း ရေတွေပါပြုန်းကုန်ပြီ။
အစာအိမ် ဗလာနဲ့ ညည်းတွားရှိုက်ငင်သံတွေထပ်လို့
တွေဝေ မိုက်မဲနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး….။
အချိန် - 12:32 AM
Pyae Sone | 11:42 PM | ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း
ရဲဘော် ခင်မာအေး(ခ) မိဥာဏ် (ခ) မဂျိုးဖြူ (ကေတု) (ခ) ဥာဏ်ဇံ
တောင်ငူမြို့ အဖ သခင်ဘဘောင်း အမိဒေါ်သိန်းတို့မှ ၂၁-၇-၁၉၄၀ နေ့တွင်မွေးဖွားပြီး ၁၄-၁၁- ၁၉၃၈ နေ့တွင် မွေးဖွားသူ (၆၂)ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီး ရဲဘော်လှရွှေနှင့် ၁၉၆၂ခုနှစ်တွင် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘ၀တွင်ပင် ဒေါ်ခင်မာအေးသည် သမဂ္ဂ၏ တ.က.သ - ဗ.က.သ၏ အမျိုးသမီးကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည်။
ရဲဘော် ခင်မားအေး(ခ) မိဥာဏ် (ခ) မဂျိုးဖြူ (ကေတု) (ခ) ဥာဏ်ဇံ
ရဲဘော်လှရွှေသည် ဘိုကလေးမြို့တွင်အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင် မြကလပ် ဆေးတိုက်ပိုင်ရှင် ဦးချစ်ညွှန့်၏ သားကြီးဖြစ်သည်။ ရဲဘော်မခင်မာအေးသည် တောင်ငူမြို့မှ ချမ်းသာသူမိဘများမှ ဖွားမြင်သော်လည်း ဂုဏ်ပကာသနပါသော မင်္ဂလာပွဲထက် နှစ်ဦးသဘောတူနားလည်မှုအပြည့် နိုင်ငံရေးသစ္စာဖြင့် လက်တွဲခဲ့သည်။ သမဂ္ဂ၏ ရဲဘော်များ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/သူများ ဆရာဆရာမများမှ လေးစားချစ်ခင်၍ မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အား ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တ.က.သ သို့ပေးပို့ခဲ့သည်။ ဆဲဗင်းဂျူလိုင် (၇.၇.၆၂) ကျောင်းသား သမဂ္ဂအဆောက်အဦးအားအာဏာရူးနေ၀င်းမှဖြိုခွဲဖျက်ဆီးအကြမ်းဖက်လူသတ်ရာတွင် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ ပစ္စည်းအားလုံး သမဂ္ဂနှင့်အတူ စတေးခံခဲ့ရခြင်းဖြင့် အိမ်ထောင်သည်ဘ၀အစပြုခဲ့ပြီး ကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကျောင်းသား သမဂ္ဂအဆောက်အဦး ဖြစ်မြောက်ရေး တ.က.သ- ဗ.က.သ ရဲ့မူ(၅)ချက်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ကျောင်းသားထုအခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေး ဒီမိုကရေစီပညာရေးနဲ့ အလံတွေဟာ ဒေါ်ခင်မာအေးရဲ့ အသွေးအသားထဲမှာ စီးဆင်းနေပြီး ကျောင်းသားရှင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂရှိတယ် ကြွေးကြော်တိုက်ပွဲဝင်ပြီး သမဂ္ဂအလံကို အမြင့်ဆုံးလွင့်ထူခဲ့သည်။ ၇၄-၇၅ မှိုင်းသန့် ဇွန်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကိုအောင်စောဦး၊ ကိုဟန်ထွန်း(ခ)စာရေးဆရာဝင်းတင့်ထွန်း၊ ကိုမိုးမြင့်၊ ကိုဗဟိန်းအောင် စတဲ့မျိုးဆက်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ဆက်အောင်နိုင်၊ ထက်မိုး၊ ခင်ထားရီ၊ နိုဗယ်အေးစတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေကို ဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့သည်။
သမဂ္ဂအမေ ဆုံးရှုံးပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း သမဂ္ဂသမီးဆုံးရှုံးရခြင်းကြောင့်- ဒေါ်ခင်မာအေးသည် သူ၏ဒေါ်ဒေါ်(အမေလူထုဒေါ်အမာ) အပေါ်မည်မျှလေးစားချစ်ခင်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။သူမ၏ အလေးစားဆုံး နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်နှင့် သူရဲကောင်းမှာ အမျိုးသားစာပေဆုပေးသည်ကိုထောင်ကျခံ၍ မယူဘဲဆန့်ကျင်ခဲ့သူ ပြည်သူလူထုစာဆို ဆရာဗန်းမော်တင်အောင်ဖြစ်ပါသည်။ သူဖြတ်သန်းခဲ့သော ခေတ်တိုင်း၊ အချိန်းတိုင်း၊ နေရာတိုင်း၊ သူမ ပခုံးပေါ်က သမိုင်းတာဝန်ကျေခဲ့ပေသည်။ သမဂ္ဂအမေ သီးချင်းနားထောင်တိုင်း နေရာတိုင်း မျက်ရည်ကျ၍ သမဂ္ဂအကြောင်းပြန်ပြောပြတတ်သူ သမဂ္ဂ၏ အသွေးအသား သမဂ္ဂ္ဂသမီးဖြစ်ပါသည်။
ဗ.က.သ ၏ ဖေါက်ပြန်ရေး ဖေါ်ကောင် သစ္စာဖောက် ဘခက်နှင့်အပေါင်းအပါးများ-(သခင်သန်းထွန်းနောက်ဆုံးနေ့စာအုပ်စာရေးသူများ) ဖော်ကောင်လုပ်ရာတွင် ဒေါ်ခင်မာအေး မှာ ကမ္ဘာကျော် “ရေကြည်အိုင်” ထောက်လှမ်းရေးစခန်းတွင် (၃)နှစ်ကြာစစ်ဆေးခံ နှိပ်စက်ခံ၊ နှိပ်စက်ခံခဲ့ရပါသည်။ ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ် မျက်မှန်ကြီးဦးတင်ဦး ကိုယ်ပိုင် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဒေါ်ခင်မာအေး၏ သတ္တိကို မင်းတော်တော်ခေါင်းမာတဲ့ အမျိုးသမီးဘဲဟု အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပေသည်။ ဗမာပြည်၏ ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားသမိုင်းတွင် မည်သည့် အမျိုးသမီးမှ စစ်ဆေးခြင်းမခံရဘူးသော စစ်ဆေးခြင်းမျိုးဖြင့် နှိပ်စက်ခံခဲ့ရသော တဦးတည်းသော အာဇာနည်အမျိုးသမီးဒေါ်ခင်မာအေး၏ မိန်းမအင်္ဂါ(ယောနိ) အားလျှပ်စစ်ဖြင့် ကျဉ်စက်တို့၍ ရက်စက်ယုတ်မာစွာ စစ်ဆေးခံခဲ့ရပါသည်။ ရေကြည်အိုင်ငရဲမှ လွတ်မြောက်ပြီး ကျဉ်စက်ဒဏ်ကြောင့် သားအိမ်ထိခိုင်သဖြင့် ကိုယ်ဝန်မမြဲဘဲ သားအိမ်ပူလွန်းသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ထိခိုက်မှုကို ရင်ကွဲမတတ်ခံစားခဲ့ရရှာပါသည်။ သားကြီး ဆက်အောင်နိုင်(၂၉.၁၁.၆၂) သားငယ်ဆက်အောင်ခုိုင် အပြင်နောက်သမီးတစ်ဦး မွေးဖွားချင်ခဲ့လေသည်။ သူငယ်ချင်းသမားတော် ဒေါက်တာ M.O ၏ ဆေးပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် နေ့စဉ် နို့ (၂၅)ကျပ်သားသောက်၍ တင်ပါးနှစ်ဖက်လုံးနေ့စဉ်ဆေးထိုး၍ တင်ပါး“ ပုတ်”သည်အထိ မိဘမေတ္တာကြီးမားစွာဖြင့် သမီးငယ် နေခြည်အား၁၂-၇-၇၇တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မနေခြည်မှာ ယခု အင်းစိန်ထောင်ထဲတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ကိုအောင်နိုင်(ကိုမင်းကိုနိုင်၏ညီ)၏ ဇနီးဖြစ်သည်။
ဒေါ်ခင်မာအေးသည် ၆-၆-၉၂နေ့တွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အချို့ကိုစုစည်း၍ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ(ယာယီ)အား ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး ၁၉-၆-၉၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွင် န.၀.တ ညီလာခံဆန့်ကျင်ရေးကြေညာချက်အား ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂ(ဗ.က.သ)(ယာယီ)ရန်ကုန်ခရိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ(ရ.က.သ)၊ မန္တလေးခရိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ(မ.က.သ)တို့ကို ပံ့ပိုးကူညီ၍ ကြေငြာချက်(၃)ခုထုတ်ခဲ့သည်။ အလုပ်သမားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့နှင့် န၀တ ညီလာခံ ဆန့်ကျင်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်နေစဉ် ဖမ်းဆီးခံရပြီး ထောင်(၃)နှစ်ကျခဲ့သည်။ ထောင်မကျခင် ၁၉၉၂ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် လာရောက်သော ကုသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ဂျပန်လူမျိုး ယိုဇိုယိုကိုတာနှင့် ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားအဖွဲ့များတွေ့ဆုံနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ ဗကသမှ ဥက္ကဌ အိုးဝေဇော် (ခ) ကိုထက်မိုး (ABSDF) ဗဟိုကော်မတီနှင့် ဇော်ဇော်လှိုင် (ယခု USA)နှင့် ယခု ပြည်တွင်းမှ ၈၈ ကျောင်းသူတစ်ဦးတို့ ကျောင်းသမဂ္ဂကိုယ်စားပြုတွေ့ဆုံစေခဲ့သည်။
ဒေါ်ခင်မာအေး အင်းစိန်ထောင်တွင် ထောင်(၃)နှစ်ကျခံသောအခါ သူ၏ အရင်ထောင်ကျနေသော ခင်ပွန်းဦးလှရွှေ (မန္တလေးထောင်) သားကြီးဆက်အောင်နိုင်(သရက်ထောင်) တို့၏ ထောင်ဝင်စာတွေ့သူ သမီးမနေခြည်အား သူ့အားလာမတွေ့ဘဲ ဦးလှရွှေနှင့် ဆက်အောင်နိုင်ကိုသာ တွေ့ရန် အနစ်နာခံ တွေ့ခိုင်းခဲ့သည်။ မိသားစု (၃)ဦး တပြိုင်ထောင်ကျမှုဖြစ်၍ ထိုစဉ်က အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နော်ဝေး ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံမှ ဂုဏ်ပြုသီချင်းတောင်းပေးခဲ့သည်။
ဦးလှရွှေသည် ထောင်ကျနှစ်အားလုံးပေါင်း နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော်ဖြစ်ပြီး ဆက်အောင်နိုင်မှာ န၀တ-နအဖ လက်ထက် ၈၈ နောက်ပိုင်း ထောင်(၄)ကြိမ်ကျသူ အများဆုံးထောင်ကျ အကြိမ်များသူဖြစ်၍ ဒေါ်ခင်မာအေးဘ၀တလျှောက်လုံး ထောင်ဝင်စာအတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာအား နှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။
မန္တလေးထောင်ဝင်စာတွေ့ရာတွင် နေပူဒါဏ်ကြောင့်မူးလဲ၍ မန္တလေးဆေးရုံတင်ရသော်လည်း ဆေးမကုပေးဘဲ အမေလူထုဒေါ်အမာ သတင်းကြားကြားခြင်း ချက်ခြင်းလိုက်သွားရာ ဆေးမကုရဘဲ အမေ့မျက်နှာ အမေ့အပြုံးဖြင့်ရောဂါ ပျောက်ပြီးဆေးရုံမှ ဆင်းခဲ့ရသည်။
မဂျိုးဖြူ (ကေတု)အမည်ဖြင့် ကဗျာ ဆောင်းပါးများ ရေးသားပြီး ဥာဏ်ဇံအမည်ဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအကြောင်းစာရေးခဲ့သည်။ ကိုအောင်စောဦး၏ နာမည်ကြီးစာအုပ်တွင် စာအုပ်နောက်ပိုင်း အမျိုးသမီးထောင်အကြောင်းမှာ ဒေါ်ခင်မာအေးလက်ရာဖြစ်သည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဖြစ်သော ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးအပါအ၀င် ကျောင်းသား/သူများနေ့စဉ်နီးပါး သွားရောက်တွေ့ဆုံလေးစားမှုဖြင့် နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံများ တိုင်ပင်ခံရသူဖြစ်သည်။
ကျဆုံးကွယ်လွန်ချိန်အထိ နိုင်ငံရေးတာဝန်ပေါင်းများစွာ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများထောင်ဝင်စာ၊ သာရေး၊ နာရေ၊ လူမှုရေးပေါင်းများစွာတို့ကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါကြောင်း အကျဉ်းချုပ်ထောက်ပြအပ်ပါသည်။
သမဂ္ဂသမီး - ၆၂ကျောင်းသူ
ရဲဘော် မခင်မာအေးသို့ …….
(သေးစိတ်သိလိုလျှင် wawlay@gmail.com, burmahlamg@gmail.com တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်)
အချိန် - 11:42 PM
Pyae Sone | 7:51 PM | အတွေး အရေး
သင်္ကြန်.. “သင်္ကန္တ” ဟူသော ပါဠိဘာသာနှင့် “ သကြံင်္န္တ” ဟူသောသက္ကဋဘာတို့မှ ဆင်းသက်လာသော ဝေါဟာရဖြစ်ပြီး ကူးပြောင်းခြင်းဟူသော အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်စက္ကန့်၊ တစ်မိနစ်မှ တစ်နာရီ၊ တစ်ရက်၊ တစ်လ စသည်အားဖြင့် ပြောင်းလဲရင့်သန်လာခြင်းသည် ကူးပြောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ဆယ့်နှစ်လပြည့်သော် တစ်နှစ်ဟောင်းချိန်ဖြစ်လျက် တစ်နှစ်သစ်ရန်တာဆူရပေမည်။ ထိုသို့ တစ်နှစ်အို၍ တစ်နှစ်ပျိုသည့် ကာလကို ကူးပြောင်းကာလ (သို့မဟုတ်) သင်္ကြန်အတာကာလ ဟုခေါ်တွင်သမုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ တန်းခူးလသည် သက္ကရာဇ်ဦးခေါင်းပြောင်းတော့မည့်လ ဖြစ်ရာ နှစ်ဟောင်းမှ အညစ်များသည် နှစ်သစ်သို့ပါလာရန် မသင့်ပေ၊ လူတို့အနေအထားအရဆိုသော် နှစ်ဟောင်းမှ စွန်းထင်းပေကျံလာသော ဒုစရိုက်မှု၊ အပြစ်အညစ်အကြေးများသည် အနာတ်ဂတ်နှစ်ဆန်းသို့ လိုက်ပါလာမှုကို လိုလားကြမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင်္ကြန်၏ သဘောသရုပ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်လျှင် နှစ်ဟောင်းမှ မလိုလားအပ်သော ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဘ၀အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို သံယောဇဉ်ကင်းကင်းနှင့် စွန့်ပယ်၍ နှစ်သစ်တွင် အားမာန်သစ်များကို ဖွင့်လှစ်လိုက်သော အခါသမယပင်ဖြစ်သည်ဆိုရမည်။ နှစ်ဟောင်းမှအညစ်အထေးမှန်သမျှကို သန့်စင်ကြည်လင်သော သင်္ကြန်ရေနှင့် ဆေးကြောပစ်ခြင်းဖြစ်နှစ်သစ်ကာလအတွက် ရွှင်းလန်းတက်ကြွမှု၊ ချမ်းမြေ့သာယာမှုစသော အလုပ်သုံးပါးတွင် ရှေ့နောက်ကြောင်းကျိုးညီညွတ်မှုသဘောကိုဆောင်ယူလေသည်။
ကူးပြောင်းခြင်းသဘောဆောင်သည့်အတာသင်္ကြန်ကို သင်္ကြန်ပန်းဖြစ်သည့် ပိတောက်ပန်းသည် ပြောင်းလည်းခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည့် သင်္ကေတပန်းဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့တွေသည် ၀င်းဝါသော ပိတောက်ရွှေဝါရိပ်မှာပင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရေပက်ဖြန်းကစားခဲ့ကြသလို ရေ၏သန့်စင်ခြင်း သဘောက နှစ်ဟောင်းမှ အမုန်းများကို ဆေးကြောရာရောက်သည်။ ရေ၏အေးမြခြင်း သဘောက နှစ်သစ်ကို မေတ္တာဖြင့် ကြိုလိုက်သည့်နိမိတ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နောင်ကျနော်တို့မျိုးဆက်တွေ အနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက် အမွေထားခဲ့ကြရမှာဖြစ်တယ် ဒါ့ကြောင့် စစ်မှန်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်တည်ရှိရေး အာဏာရှင်စစ်အစိုးရကိုတော်လှန်ဖြုတ်ချရေး၊ ယခုစစ်အစိုးရ၏ဆန္ဒမဲကိုကန့်ကွက်မဲပေးရေး စသည်တို့ကို နောင်မျိုးဆက် သားစဉ်မြေးဆက် ယခုလို စစ်ကျွန်ဘ၀မရောက်ရလေအောင် အမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်သွားကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
အချိန် - 7:51 PM
Pyae Sone | 11:52 AM | Statement
ပြည်သူအားလုံးဟာလဲ ကျနော်တိုနဲ့တသားထဲ ဖြစ်လာတာတွေ့ရတဲ့ အတွက် ခံစားမှု၊နိုးကြားတက်ကြွမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဟာ လူထုကပေးတဲ့ အင်အား
တွေပါ။အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ပြည်သူများအနေနဲ့ကန့်ကွက်မဲပေးတာနဲ့
ပတ်သတ်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ဘယ်အကြောက်တရားကိုမဆို ကျော်
လွှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဖေါ်ထုတ်ကန့်ကွက်မဲပေးကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကန့်ကွက်မဲပေးရေးဆိုတဲ့ တာဝန်ဟာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားမှာ မည်သူတဦးတယောက်ကမှ မတိုက်တွန်းပဲ မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စတေးခံ ဆိုတာ ကျနော်တို့ချည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမအားလုံး၊မြန်မာ တပြည်လုံးဟာလက်တဆုတ်စာ စစ်အာဏာရှင်တွေ အတွက် အသုံးချ စတေးခံနေရတာပါ။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ဟာ လက်တဆုတ်စာ စစ်အာဏာရှင်တွေအတွက်တော့ စတေးမခံဘူး ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတွေ၊ထောင်ကျနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင် ခေါင်းဆောင်တွေ ကျောင်းသားတွေ သံဃာတွေ အားလုံး
နောက်ပြီး ကျနော်တို့နောက်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ မျိုးဆက်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးစတေးခံပြီး စစ်အာဏာရှင်ကုိ တိုက်ထုတ်ကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
အချိန် - 11:52 AM
Pyae Sone | 9:59 AM | ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း
နိုင်ငံရေးမလုပ်ရင် 'အ' တယ်သားရဲ့ ...။
သားတို့ အမေ မသေချင်သေးဘူး
အမေ ဒီလူသတ်စစ်အာဏာရူးတွေ ပြုတ်ကျတာကို မြင်ချင်သေးတယ်။
အမေတို့ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေကို သတ်ဖို့ လက်နက်တွေ တရုတ်က ပေးနေတယ် ဒါကြောင့်မို့ တရုတ်ပြည်ကို အမေတို့ ဗမာပြည်သူပြည်သားအားလုံး ဆန့်ကျင်ရမယ် မုန်းတီးရမယ် ဒီစကား ဆွေစဉ်မျိုးဆက် သားတို့ လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ပြောသွားရမယ် ။
အမေတို့ မန္တလေးက ဆွေမျိုးတွေနဲ့ ရဲဘော်မိတ်ဆွေတွေကို အမေမှာထားတယ် ငတ်သေသွားပါစေ ဒီနယ်ချဲ့တရုတ်တွေကိုတော့ အိမ်တွေခြံတွေမရောင်းကြပါနဲ့…..။
(နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးမှာ စတင်တော်လှန်ခဲ့ရာ နန်းတက္ကသိုလ်ရင်ခွင်ဦးမှာ ကိန်းဝပ်ခဲ့သူအမေ
ပုန်ကန်တာသားတို့ တရားလို့အမေ ဟိုစဉ်မှာ လမ်းပြခဲ့တဲ့အမေ/
သွန်သင်ကာ သားကောင်းသမီးကောင်းတွေ ထိုစဉ်ခါ မွေးထုတ်ခဲ့တဲ့အမေ)၂
(ဒေါင်းမိခင် ဂုဏ်ဒြပ် ကျေးဇူးကြီးမားလှပုံတွေ သား/သမီး တို့တတွေ ရင်မှာအောင်းမေ့ ဦးညွှတ်မိတယ်လေ)၂
တိုင်းအကျိုးဆောင်ဖို့လေ အများအကျိုးဆောင်ဖို့လေ အမျိုးကောင်းမောင်တို့ရေ… အမျိုးကောင်းမယ်တို့ရေ အရာရာမှာ စွန့်လွှတ်ဝံ့ကြစေ မြန်ဌာနေ မလွတ်လပ်သေးတော့လေ
(အောင်ဆန်းတို့အမေ ဗဟိန်းတို့အမေ အောင်ကျော်တို့အမေ ချွန်မြကြစေ တွန်ကကြစေ ဇာဏီအိုးဝေ )၂
(မြန်ဌာနေ မလွတ်လပ်သရွေ့တော့ လွတ်လပ်ဖို့လေ တပ်လှန့်လို့နေ မြန်ဌာနေ လွတ်လပ်တဲ့အခါ အမျိုးသားရေးကို ကြိုးပမ်းလို့လေ)၂
အမေ အမေ အစဉ်အလာကြီးမားခဲ့တဲ့အမေ
သမိုင်းတခေတ်မှာလေ အသဲနင့်စရာအဖြစ်ဆိုး တို့ကြုံပြီလေ အာဏာလွှမ်းမိုး လက်နက်အားကိုးလေ ပလ္လင်ခြေမှာလေ သမဂ္ဂမြေ လဲကျမွကြွေ ဇူလိုင်မြေသွေးစွန်းခဲ့ရပေ
အမေ ကျဆုံးသူများဝိညာဉ်တွေ အမေ့အား အစဉ်စောင့်ရှောက်ကာနေ ယုံကြည်အမေ ကမ္ဘာတည်အောင် သေနိုင်ရိုးလားအမေ
သမိုင်းသစ်လာ ရှစ်ဂဏာန်းတွေ အရိုင်းတခေတ်ဟာ ညစ်နွမ်းနေ ဘယ်လိုဖြိုဖျောက်ဖျက်လည်းလေ သမဂ္ဂအမေ မပျောက်ပျက်ခဲ့ပေ ဒီမိုရွှေ အုတ်ချပ်အသစ်တွေ အစားထိုးလို့လေ ကျေးဇူးတရားတွေ အမေ…. အမေ…. ကျေပြွန်အောင် သားတို့ဆပ်ပါရစေ…
(မြေသီလာနန်းတက္ကမြေ ခေါင်းလောင်းထိုးချွေ ဒေါင်းလည်းအိုးဝေ ကြိုနေမယ် သမဂ္ဂအမေ အပြုံးနုလဲလေ… ရင့်ကျက်တဲ့အမေ)၂
အမေ… အမေ… အမေဟာ ဘယ်တော့မှမသေ……
၂၅.၉.၁၉၉၀ အင်းစိန်ထောင်အတွင်း တိုက်အားလုံး၏ အနိုင်ရပါတီ အန်အယ်လ်ဒီအား “အာဏာလွှဲပြောင်းရေး” အသေခံတိုက်ပွဲမှ…
သရက်ထောင်တွင်း အကျဉ်းကျခံနေရသော သားအငယ်ဆုံး ကိုညို (ခ) ကိုငြိမ်းချမ်း(ခ)စာရေးဆရာ ညီပုလေးအား ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ရာ အမေမှတ်ပုံတင်မပါ၍ အမေ့လိုနိုင်ငံကျော်ကမ္ဘာသိ စာရေးဆရာ သတင်းစာဆရာလူထုအမေကို ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မပေးခဲ့ပါ အမေ မောမောနဲ့ပြန်လာပြီး အိမ်ရောက်သော်(သားရေ… ကိုညိုက ထောင်(၇)နှစ်တဲ့… )အမေ့ကို အမေ့ သားသမီးများမှ ကိုညိုထောင်သုံးနှစ်ဘဲ ကျတယ်လို့ ပြောထားခဲ့တယ်။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂနှင့်အမေ အမေနှင့်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဘယ်တော့မှခွဲမရခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်အမေ.... သမဂ္ဂအမေ.....
အချိန် - 9:59 AM
Pyae Sone | 3:02 AM | poem | ကဗျာ
ငါတို့ရဲ့ အမှန်တရားတွေ တစ်လောကလုံးကို
အချိန် - 3:02 AM
Pyae Sone | 11:08 PM | poem | ကဗျာ
မပြောင်းလဲတဲ့ သတင်းကတော့ ကြားရမြဲပင်
ကြမ္မာဆိုးဝင် ဘုရားသခင်က အပြစ်ပေးတော့မယ်
ချယ်ရီ (နို့ဖိုး စခန်း)
အချိန် - 11:08 PM
Pyae Sone | 11:26 AM | Statement
♥ ဒို့ရိုသေလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့ သံဃာတော်တွေကုိ မင်းတို့သတ်ခဲ့တယ်။
♦ မင်းတို့ရဲ့ မိဘတွေဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ သွေးတွေနဲ့ ခြေဆေးခဲ့တယ်။
♥ မိဘတိုင်းရဲ့ ရင်နင့်သည်းချာဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း မင်းတို့
♦ ဒို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံး မင်းတို့ကိုဘယ်လောက်ပတ်ပတ်စက်စက် ရွံမုန်း
♥ ကန့်ကွက်မဲသည် တို့ရဲ့လက်နက်ပဲဖြစ်တယ်။
♦ သန်း(၅၀)ကျော် ပြည်သူတွေဟာ ဒို့ရဲ့လူတွေပဲ။
♯ လက်တွဲညီညီ မဲရုံဆီသို့
သွေးကြွေးဆပ်ခွင့် <> ကြုံပြီ ဟေ့ …..
Pyae Sone | 1:04 AM | အတွေး အရေး
မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့သည် ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကိုတော်လှန်ခဲ့သည်မှာယခုဆိုလျှင် (၆၃)ပြည့်ပြီဖြစ်သည်။ မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့သည် တပ်မတော်နေ့ဖြစ်ပါသလား ? အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်နေ့ကိုအစွဲပြု၍ အထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာလ(၂၄)ရက်ကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခါစနှစ်များတွင် မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့ကို “ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့”အဖြစ်အောင်ပွဲသဘင်ဆင်ယင်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့ မတ်လ(၂၇)နေ့သည် “ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့”သာဖြစ်သည် တပ်မတော်နေ့မဟုတ်ပါ။ စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သောနေ့ဆိုလျှင် ဒီဇင်ဘာ(၂၆)ရက်နေ့သည်သာ ဗမာတမျိုးသားလုံးတိုင်းရင်းသားအားလုံး ကိုယ်စားပြုသောတပ်မတော်နေ့သာဖြစ်သင့်ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ရဲဘော်သုံးကျိပ်တို့သည် ၁၉၄၁ ဒီဇင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့ စနေနေ့ည (၁း၀၀)နာရီအချိန်တွင် ယိုးဒယားပြည် ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ဦးလွန်းဖေ၏နေအိမ်တွင် (BIA)ခေါ် ဗမာ့တပ်မတော်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းပြီး လက်မောင်းသွေးဖောက်သောက်ခဲ့ကြသည်။ထို့နောက် ၁၉၄၅ မတ်လ(၁၇)ရက်နေ့တွင် ရန်သူကိုစတင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် တပ်မတော်ဦးဆောင်၍ စစ်မြေပြင်ကိုထွက်ခဲ့သည်။ မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့တွင် တိုင်းသူပြည်သားများအား သေနတ်ဖြင့်ဖိနှိပ်၊ အမျိုးသမီးများအား အဓမ္မပြုကျင့်၊ ပြည်သူများ၏ပစ္စည်းများကို မတရားသိမ်းစည်းခဲ့ကြသော စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာမုန်းတီးဖွယ်ကောင်းသော ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ကို (BIA) ဗမာ့တပ်မတော်သည် ပြည်သူလူထုအားနဲ့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီတို့နှင့် လက်တွဲ၍ တော်လှန်ဆင်နွှဲခဲ့သည့်နေ့ဖြစ်ပါသည်။
အာဏာရှင်စစ်အစိုးရသည် တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျတော့မည်၊ ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲတော့မည် ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြစ် ၁၉၆၂ခုနှစ် မတ်လ(၂)ရက်တွင်အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။ ယင်းသို့သိမ်းပိုက်ခဲ့သော အာဏာရှင်စစ်အစိုးရသည် ၁၉၆၂ခုနှစ်မှ စ၍ (၄၆)နှစ်ကျော်သက်ဆိုးရှည်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုသည် ယနေ့ထိ လူထုကို အမြဲတစေ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ်နအဖခေါင်းဆောင်များသည် မတ်လ(၂၇)နေ့ကို တပ်မတော်နေ့ဟူ၍ သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ် တပ်မတော်၏ ဂုဏ်ရည်များကို ပစ်ပယ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့သည် အနာဂတ်သမိုင်းအတွက် ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကို မဖြစ်မနေပြောင်းလဲပစ်ကြရမည် ဒါမှသာ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုစနစ်နဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်နိုင်မှာပါ…။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မြန်မာမျိုးချစ်တပ်မတော်သားများအနေဖြင့် အာဏာရူးစစ်ဗိုလ်ချုပ်တစုမတရားသိမ်းပိုက်ထားသော အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ်နအဖတပ်မတော်အား အမြန်ဆုံးပြန်လည်သိမ်းပိုက်၍ ပြည်သူချစ်သော ပြည်သူ့တပ်မတော်အဖြစ်ပြောင်းလည်းသင့်ပါကြောင်းတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
အချိန် - 1:04 AM
Pyae Sone | 1:08 AM | အတွေး အရေး
မစိုးဝှက်က တက်ထားတာကြာပါပြီ.. ကျနော်လည်း ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတာရယ်…. လမ်းခရီးမှာရောက်နေတာရယ် အလုပ်တွေများနေတာနဲ့ မရေးဖြစ်မတင်ဖြစ်တာပါ… အခုကျနော်လည်း စိတ်ကူးပုံဖော်မိတာလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အခြားသူတွေလို မည်သည့်စံနှုန်းတွေ ကိုယ်ကကြိုက်တာတွေ သူကတော့ ဘယ်လိုဘယ်ဝါဆိုတာတွေတော့ မပါပါဘူး.. ကျနော့်စိတ်ကူးထဲက ဖြစ်စေချင်တာလေးတွေကို လေ့လာမိသလောက်မျှဝေးပေးလိုက်တာပါ…။ တကယ်တော့ကျနော်က လက်တွဲဖော်တော့မရှိသေးပါဘူး.. ရည်ရွယ်သူတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်...(တကယ်ပါ) ဒါပေမယ့်….
ဘာမှသေချာရေရာခြင်းမရှိတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ အချစ်နဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်တည်းကျဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး.. ကံစီမံရာပေါ့...။ ကျနော်တို့ မြန်မာအိမ်ထောင်မှုဓလေ့မှာရှောင်ရန် ဆောင်ရန်ဆိုတာကို အားလုံးသိကြမည်ထင်တယ်..။ “ဓမ္မာ ၊ သောက ၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ”စတဲ့ မရွေးချယ်ရဘူးဆိုပြီးအဆိုရှိတယ်.. .နောက် “ ဥဿ၊ စိန်ပန်း၊ ဒန်းလှ” ကိုရှာဆိုပြီးအဆိုတွေရှိနေကြပေမယ့် ကိုယ်ကအရမ်းချစ်နေရင်တော့ မဖြစ်ပြန်ဘူး.. ဖူးစာပေါ့လေ..။
ကိုယ့်ရဲ့အတ္တ တစ်ဝက်ပေးဆပ်ရခြင်းမျိုးမဟုတ်၊ သူ့ရဲ့အတ္တ အလုံးစုံပုံနှစ်ထားခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ တသားတည်းရှိတဲ့ ခံစားမှုတွေနဲ့ နွေးထွေးခြင်းမျိုးရှိတဲ့ လက်တွဲဖော်….။
လျှို့ဝှက်ချက်မရှိ ရိုးသားပွင့်လင်းခြင်းသာအခြေခံတဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းက လူနှစ်ဦးကို ဘ၀ထဲမှာ သူရှိနေတာ အနှောင့်အယှက်တစ်ခုမဖြစ်စေဘဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ ကြင်နာခြင်းသာ မျှဝေလိုသူ…။ သံယောဇဉ်တွေ ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့လို့ကြုံဆုံလာရမယ့် ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ လောကဓံတရားတွေကို ရင်ချင်းအပ်ကျောချင်းကပ်ပြီး အတူဖြေရှင်းကြလို့ ဘ၀ထဲ ကကောင်းတာတွေယူပြီး အကောင်းတွေပဲ ပြန်လည်ပေးဆပ်ခိုင်းဖို့ လျှောက်လှမ်းရမယ့် ခရီးလမ်းတိုင်းအတွက် သူ့ရဲ့ လက်တစ်စုံဟာ ခွန်အားဖြစ်စေလိမ့်မယ်…။
သို့မှသာ တွေးလိုက်တိုင်းပျော်ပြီး အပျော်တွေပဲ တွေးမိစေတဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးအပျော်တွေနဲ့သာ လွှမ်းခြုံရစ်ပတ်ထားတဲ့ အဲဒီချစ်ခြင်းတွေသည် အရာရာပြီးပြည့်စုံစေမှာပါ….။
အနာဂတ်နေ့သစ်တွေအတွက် ခရီးဆုံးတိုင်အတူရှိကြမယ့် မနက်ဖြန်တွေ မနက်တွေတိုင်းဟာ လှပနေလိမ့်မယ်ဆိုတာ အသေအချာပါဘဲ….။
အချိန် - 1:08 AM
Pyae Sone | 7:20 AM | Statement
အချိန် - 7:20 AM
Pyae Sone | 9:39 PM | poem | ကဗျာ
နွေဦးရဲ့ရနံ့က လေရူးနဲ့အတူ တုန်ခါ
ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ ဆွေးမြေ့ကြေကွဲဖွယ် တိတ်ဆိတ်လို့
ဟိုး ... ဝေးဝေးမှာ သဇင်တွေကြွေကုန်ပြီ ....
ကျနော်ဒီကဗျာလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရစေ.. ကျနော်ခရီးတခုထွက်စရာရှိလို့ ဘလော့ဂ်နဲ့ခဏဝေးနေရအုံးမှာပါ ကျနော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ခွဲရတော့မယ်ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ လမ်းကလေးတလမ်းတည်းမှာ လမ်းလျှောက်နေရသလို ခွဲသွားရမယ့်သူရယ် ကျန်ရစ်နေခဲ့ရမယ့်သူရယ် ရင်ထဲမှာဆိုနင့်ကြေကွဲစရာအဖြစ်မျိုး။
ရောက်လာကြသော သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အတွက်ကျနော့်ရဲ့ အမှတ်တရ နွေဦးအတွက်လက်ဆောင်လေးတွေယူသွားကြပါ...
ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ကို သဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်... ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ရေဘူးနှင့်ဖိနပ်မပါရင် ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေ နွေရာသီမှာ ဒုက္ခရောက်မှာဆိုးလို့ပါ။ (ရေဘူးနှင့်ဖိနပ်မပါရင် နွေခါမှသိတဲ့ -- မြန်မာစကားပုံ)
လာရောက်ဖတ်ရှုကြသော သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျနော်ခေတ္တခဏခွဲခွာခြင်းသာ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြအုံးမှာပါ...။
အချိန် - 9:39 PM
လက်တလော ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်၊ ဆန္ဒ၊ ခံယူချက် ဖြစ်တည်မှု....
ဒေါ်စု (၆၃) နှစ်မွေးနေ့မှသည်အသက်ရာကျော် ရှည်ပါစေ......